Rivo-doza: Jamaica, Cuba, Cayman Islands, US Gulf Coast
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Rivo-doza: Jamaica, Cuba, Cayman Islands, US Gulf Coast
Oktobra 4, 2020
Ny fahaketrahana tropikaly iray dia niforona tany atsimon'i Jamaika tao amin'ny Ranomasina Karaiba ny harivan'iny hariva ary nanjary voalamina tsara kokoa, hoy ny National Hurricane Center.
Ny National Hurricane Center dia namoaka io torohevitra io tamin'ny 11.00 alina EST ny alahady;
Andrasana ny toetr'andro any amin'ny Nosy Cayman manomboka ny alatsinainy hariva izao ary hisy ny fampitandremana ny tafio-drivotra tropikaly.
Ny trangana tafio-drivotra sy ny rivodoza mampidi-doza dia azo atao any amin'ny faritra atsinanan'i Kiobà Andrefana sy ny Isle of Youth amin'ny talata tolakandro ary fiambenana tadio izay manan-kery.
Hisy fiantraikany amin'ny ampahany amin'ny Hispaniola, Jamaica, ny Nosy Cayman, ary ny faritra andrefan'i Cuba mandritra ny andro vitsivitsy ny oram-batravatra ary mety hiteraka tondra-drano sy fihotsahan'ny riandrano.
Ny rafitra dia vinavinaina hanakaiky ny morontsiraka avaratr'i Etazonia amin'ny faran'ny herinandro ho toy ny rivodoza. Na dia misy tsy fahatokisana lehibe aza eo amin'ny lalana sy ny vinavinan'ny toetr'andro amin'izao fotoana izao, dia atahorana ny loza ateraky ny tafio-drivotra, ny rivotra ary ny rotsakorana any amorontsiraka avy any Louisiana ka hatrany amin'ny Andrefana Florida Panhandle.
Fandalinana Antibody COVID-19: fandinihana mahatalanjona sy mpanakalo lalao?
San Francisco mankany Shanghai indray manidina tsy miato